အိပ်မက်ရှင်...: ခဲဖျက်လေးနဲ့ ခဲတံလေး
မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေက အတူတူဝေမျှဖို့ပဲ ...
Written in Myanmar3 unicode font. If you want to know about the unicode download and installation, please click on here for more detail informations.
ခဲတံလေး ။ ။ ငါ မင်းကို ငါတောင်းပန်ပါတယ် ခဲဖျက်လေးရယ် ...။
ခဲဖျက်လေး ။ ။ ဘာအတွက်လဲ ခဲတံလေး? မင်း ဘာအမှားတစ်ခုမှ လုပ်မိတာ မရှိပါဘူးကွယ် ...။
ခဲတံလေး ။ ။ ငါ အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါ မင်းကို အမြဲထိခိုက်နာကျင်ရအောင် ပြုလုပ်နေမိလို့ပါ၊ ငါ အမှားတွေ ရေးခြစ်နေမိတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ အမြဲတမ်း မင်းက ဖျက်ပစ်လို့ပေးခဲ့တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ငါရဲ့ အမှားတွေ ပျောက်ပျက်သွားအောင် ဖျက်ပေးလိုက်တိုင်းမှာ မင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆုံးရှုံးပေးနေရတယ် မဟုတ်လား၊ ဒီ့အတွက် မင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းပါးလျလာပြီး သေးငယ်ပျောက်ကွယ် နေရတာမို့ပါကွယ် ...။
ခဲဖျက်လေး ။ ။ မှန်ပါတယ် ခဲတံလေး၊ ဒါပေမယ့် မင်းကို ငါ တကယ်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ မင်း မှားယွင်းခဲ့တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ငါ ဒီလို အမှားတွေကို ဖျက်ပစ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ မင်း အသိဆုံးပါ၊ အဆုံးတစ်နေ့မှာ တဖြည်းဖြည်းပါးလျလို့ သေးငယ်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး မင်း ငါ့နေရာမှာ အသစ်တစ်ခု အစားထိုးခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် ငါ့လုပ်ရပ်အတွက် ဂုဏ်ယူလို့ ပြုံးပျော်ကြည်နူးနေမိမှာ အမှန်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ မင်းရဲ့ စိုးရိမ်သောကရောက်နေတာတွေကို အခု ချက်ခြင်းရပ်တန့်လိုက်ပါတော့ကွယ်၊ မင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကို မြင်ရတာလောက် မုန်းမိတဲ့အဖြစ် မရှိပါဘူး ခဲတံလေးရယ် ... ။
အခုလို ခဲတံလေးနဲ့ ခဲဖျက်လေးတို့ရဲ့ စကားပွဲကလေးကို ငေးကြည့်နေမိရင်းက ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ အတွေးလေးတွေ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့ လူ့လောကမှာ မိခင်၊ ဖခင်တွေဟာ ခဲဖျက်ကလေးရဲ့ အဖြစ်နဲ့ တူနေခဲ့ကြပြီး ကျွန်တော်တို့သားသမီးငယ်တွေကတော့ ခဲတံလေးနဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူနေခဲ့ကြတယ်၊ မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ အမြဲထာဝရ ရှိနေခဲ့ကြတယ်၊ သားသမီးတွေရဲ့ အမှားအယွင်းတွေကို ရှင်းလင်းဖို့၊ သုတ်သင်ပေးဖို့ အမြဲ အသင့်ရှိ နေခဲ့ကြတယ် မဟုတ်လား၊ ဒီလို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ဖယ်ရှားပေးရင်းနဲ့ပဲ မိဘတွေဟာ တစ်ချိန်မှာ ခဲဖျက်ကလေးလို တဖြည်းဖြည်း ပါးလျသေးငယ်လို့၊ အိုမင်းရင့်ရော်လို့၊ မသန်မစွမ်း နာမကျန်းဖြစ်လို့ ဆုံးပါး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြတာပါပဲ၊ သူတို့ ပျောက်ကွယ်သွားကြတဲ့အချိန်မှာ ခဲတံလေးလို သားသမီးတွေဟာ သူတို့နေရာမှာ ဇနီး၊ ခင်ပွန်းတွေလို ခဲဖျက်အသစ်တစ်ခုကို အစားထိုးကြရင်း ဘဝရှေ့ဆက် မှန်ကန်အောင် လျှောက်လှမ်းသွားခဲ့ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် မိဘတွေဟာ သူတို့ ရှင်းလင်းသုတ်သင်၊ လမ်းမှန်ပြ ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သမျှကို တွေးပြီး ပျော်ရွှင်နေကြတုန်းပါပဲ၊ ကြည်နူးနေကြတုန်းပါပဲ၊ သားသမီးတွေကို ချစ်ဆဲ ခင်ဆဲ ကြင်နာစောင့်ရှောက်ဆဲပါပဲ။ သားသမီးတွေ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ သောကရောက်ရမယ့် အဖြစ်တွေကို မတွေ့လို မမြင်လိုကြပဲ၊ အဲလို အဖြစ်တွေကိုတောင် မိဘတွေက မလိုလားကြပဲ ထာဝရမုန်းတီးနေဆဲပါ ... ။
ကျွန်တော့်ဘဝကာလတစ်လျှောက်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ခဲတံလေး ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဘဝမှာ ပြုလုပ်မိခဲ့တဲ့ အမှားအယွင်းတွေအတွက် ကျွန်တော့်မိဘတွေဟာ ခဲဖျက်လေးလိုပဲ ပါးလျခံ၊ အနစ်နာခံပြီး ဆုံးမသွန်သင်၊ ပြုပြင်လမ်းမှန်ပြခဲ့ရင်း သူတို့ရဲ့ နေ့တွေ ဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်နေခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ဒါကို သိမြင်နားလည်လာမိတဲ့ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော် ရင်ထဲ သိပ်ကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီအဖြစ်ဟာ ကျွန်တော့်နှလုံးသည်းပွတ်မှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထင်နေတော့မှာ ဖြစ်ပြီး၊ မိဘတွေရဲ့ အနစ်နာခံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးသမျှကို တန်ဖိုးထား ခံယူသွားတော့မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မိတယ်။ ခဲဖျက်လေး ပျော်ရွှင်နေသလို သူတို့တွေ ထာဝရပျော်ရွှင်စေဖို့ ကျွန်တော့်ဘဝထဲက အမှားအယွင်းမှန်သမျှကို ပြုပြင်၊ ပြင်ဆင်ရင်း ကျွန်တော့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတွေ သောကတွေကို မသိတတ်ခဲ့ခြင်းရဲ့ နောက်ကျောဥပစာမှာ ချန်လို့ ထားရစ်ခဲ့ပါတော့မယ်....။ ။
အကြွင်းမဲ့မေတ္တာရှင် မိခင်ဖခင်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ... ။
Blogger Jamie Wong ရဲ့ The relationship of eraser and pencil ပိုစ့်ကို ခံစားပျော်ဝင်လို့ ဘာသာပြန်ဖွဲ့ဆိုပါတယ် ... ။ မူရင်းကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ... ။
Photo credit to http://jamie-qh.blogspot.com
သီကုံးဖွဲ့နွဲ့သူ အိပ်မက်ရှင် အချိန်က 3:09 PM
Written in Myanmar3 unicode font. If you want to know with about unicode font download and installation, please click here for more informations.
အိပ်မက်ရှင် (ကဗျာပြတိုက်) သို့
Unicode To Zawgyi Converter
Myanmar unicode rules table
Keyman-Myanmar3 Keyboard Download link
Download and installing myanmar unicode
အိပ်မက်ရှင်ရဲ့ Follower များ
ပြောပြချင်သော ပုံပြင်များ (1)
ရင်ထဲက စကားများ (2)
မြည်းတစ်ကောင်နှင့် သားအဖ နှစ်ယောက်
သူ​တို့​လည်း အိပ်မက် မက်​ကြ​ပါ​တယ်
WeChat App အပါအဝင္ Malware ပါေသာ App မ်ားကို Apple မွ ဖယ္ရွားေနရ
Copyright @ အိပ်မက်ရှင်. Powered by Blogger.